EX - ABSDF: သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၁-၁၀)
နိုင်ငံခြား အကူအညီ အရွယ်မရောက်သေးသူ မိန်းကလေးအား ခဲအိုက အဓမ္မပြုကျင့်
ဦးသူရိယက မဘသရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချ
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကို ရှောင်ဖို့ ရုရှားနဲ့ ကန် သဘောတူ
ဆီးရီးယားအရေး ရုရှားနဲ့ အမေရိကန် ဆွေးနွေး
တပ်တွင်းမဲရုံ ၂၅ ရုံ တွင် ပါတီမဲဆွယ်ခွင့်မရှိ
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ငါးလပတ် ကုန်သွယ်မှု လိုငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၁၉၄. ၃၁ သန်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေကြီးဆုံးရှုံးမှု မြင့်မားလာခြင်းမှာ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့်ဟု ADB ဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ပြောကြား
ရန်ကုန်-စစ်တွေသွား ကမ်းရိုးတန်းသင်္ဘော ကံ့ကော်ထူး(၁) နစ်မြုပ်၍ သင်္ဘောသား ၉ ဦးပျောက်ဆုံးနေ
စစ်တပ် ပစ်ခတ်မှုရပ်ဖို့ မန်စီမြို့ခံတွေ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ စာပို့
လမ်းဘေးရပ်ထားသည့် ထရပ်ကားကို ဆိုင်ကယ်ဖြင့်တိုက်၍ တစ်ဦးသေဆုံး
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုကြောင်း တားမြစ်ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူသတိပေး
ရုရှား နိုင်ငံ မှ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ အတွင်း ရှိ IS အဖွဲ့အား လေယာဉ် အစင်း ၂၀ ခန့်ဖြင့် ဗုံးကျဲ တိုက်ခိုက်
IS စစ်သွေးကြွတွေကို ဆီးရီးယားမှာ အမေရိကန်လေကြောင်းက ဆက်တိုက် ​ဘာ​ရိန်း​မှာ ​ဖေါက်​ခွဲ​ပ​စ္စည်း ​အ​များ​အ​ပြား ​သိမ်း​ဆည်း​မိ
​ ပါ​လက်​စ​တိုင်း​အ​လံ ​ကု​လ​သ​မ​ဂ္ဂ​မှာ ​လွှင့်​ထူ
မြန်မာအလုပ်သမားရေး ဥပဒေတချို့ ပိုမိုထိရောက်အောင် ပြင်ဆင်ဖို့ရှိ မြန်မာလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့ Fortify Rights အဖွဲ့ တိုက်တွန်း တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ငါးဖမ်းလှေများကြောင့် ကော့သောင်မြို့ခံ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလှေများ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရ
သာပေါင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ ရေကြီးနစ်မြုပ်ဆဲ လယ်ယာမြေနှင့်အင်းလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားနေ
​နေ​ပြည်​တော်​မှာ ​လူ​သတ် ​အ​ဓ​မ္မ​ကျင့်​မှု ​ဖြစ်
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ ဆက်နွယ်ကြောင်းတရားစွဲ ခံရသူ ထောင် ၃ နှစ်ချမှတ်ခံရ
ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်တွင် လမ်းဘေးရောက် ကလေးငယ်များစွာရှိနေ
တရုတ်ကြေးနီကုမ္ပဏီရေဆိုး ထုတ်လွှတ်မှု ငါးအမြောက် အများသေဆုံး
နိုင်ငံခြား အကူအညီ Posted: 01 Oct 2015 06:28 AM PDT
နိုင်ငံခြားက အလကားပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ပွေ၊ အတိုးမယူဘဲချေးတဲ့ငွေနဲ့ အတတ်ပညာ ကူညီထောက်ပံ့မှုဟာ နိုင်ငံခြား အကူအညီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံခြားက အကူအညီပေးရာမှာ အရင်ဆုံး အကျိုးခံစားရသူတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့ ခရိုနီသူဌေးတွေ ဖြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့  လူမှုရေးအကူအညီကို အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ Development Alternatives ကုမ္ပဏီဟာ ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်
အရွယ်မရောက်သေးသူ မိန်းကလေးအား ခဲအိုက အဓမ္မပြုကျင့်
Posted: 01 Oct 2015 06:28 AM PDT
ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရွာ၊ သန်လျင်မြို့နယ်တွင် အရွယ်မရောက်သေးသူ ဆဋ္ဌမတန်း ကျောင်းသူတစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ မှုခင်းမှတ်တမ်းအရ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဦး......(၅၇) နှစ်သည် အလုပ်မှ အိမ်ပြန်ရောက်စဉ် အိမ်နီးချင်းနေ မ..... (၃၃) နှစ်သည် နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဦး......(၅၇)နှစ်၏ သမီးဖြစ်သူ မ......(၁၃) နှစ် ခြောက်တန်းကျောင်းသူမှာ ကိုယ်အနေအထား မမှန်ြေ
Posted: 01 Oct 2015 04:27 AM PDT
မန္တလေးတိုင်း ​အမရပူရမြို့ ​မဟာကန္ဓာကျောင်းတိုက် ​ဆရာတော် ​ဦးသူရိယက ​မဘသ ​ဘုန်းကြီး ​တချို့နဲ့ ​မဘသ ​ဗဟိုတို့ကနေ ​ပြည်သူတွေကို ​ဇဝေဇဝါ ​ဖြစ်အောင်
​ဘာသာရေးကို ​နိုင်ငံရေးလက်နက်အဖြစ် ​သုံးပြီး ​ဟောပြောစည်းရုံးတဲ့အပေါ် ​ရှုတ်ချကြောင်း ​ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီမနက်မှာပဲ ​ထုတ်ပြန်တဲ့ ​လူထုသို ​အသိပေးခြင်း ​ဆိုတဲ့ ​ကြေညာချက်ထဲမှာ ​မဘသကနေ ​ဘာသာရေးကို ​အသုံးချပြီး ​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့
Posted: 01 Oct 2015 04:15 AM PDT
ရုရှားနိုင်ငံပိုင် Sukhoi SU-24 လေယာဉ် (Credit: AFP)
ဆီးရီးယားနိုင်ငံက ​အကြမ်းဖက်တွေကို ​တိုက်ခိုက်ရင်း ​အမေရိကန်နဲ့ ​ရုရှားတပ်တွေအကြား ​ပစ်ခတ်မှုတွေ ​မဖြစ်အောင် ​ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြဖို့ ​အမေရိကန်နဲ့ ​ရုရှားတို့ ​သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
ရုရှားက ​ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ ​ဝေဟင်အကြမ်းဖက်မှုတွေ ​လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ​အမေရိကန်နဲ့ ​ရုရှားတို့ ​အခုလို ​တွေ့ဆုံပြီး ​သဘောတူညီမှု ​ရယူတာပါ။
တဖက်နဲ့ ​တဖက် ​မှားယွင်း
ဆီးရီးယား အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရုရှားနဲ့ အမေရိကန် စစ်ရေးအရ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John Kerry တုိ့ သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။
ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာ ရုရှားတို့က ပထမဆုံးအကြိမ် လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့အပြီး နာရီပိုင်းအကြာမှာပဲ နယူးယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မစ္စတာ Kerry က
Posted: 01 Oct 2015 04:12 AM PDT
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မနောကွင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မဲဆွယ်စည်းရုံး ဟောပြောခွင့်မပြုကြောင်း ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မနေ့ညက အကြောင်းပြန်လိုက်ပြီး မနောကွင်းဝင်ပေါက် သုံးခုကို သော့ခတ်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။
မနောကွင်းမှာ ဟောပြောပွဲစင်မြင့် ဆောက်ဖို့အတွက် အရင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဒီနေ့မနက် သယ်ယူဖို့အတွက် အထဲကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ် အောင်မြ
ကယားပြည်နယ်ရှိ တပ်ဧရိယာတွင်း မဲရုံ(၂၅)ရုံထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး တပ်တွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများက မဲဆွယ်စည်းရုံး ဟောပြောခွင့်မရှိ ၊ တပ်ဧရိယာပြင်ပတွင်သာ ခွင့်ပြုထားသည်ဟု ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲအရာရှိ ဦးကျော်ဆန်းဝင်းပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ကယားမှာ တပ်တွင်းမှာမဲရုံ (၂၅)ရုံ ထားမှာဖြစ်တယ်။ ဒီတပ်တွင်း မှာရှိတဲ့ မဲရုံ (၂၅)ရုံကို ကိုယ်စာလှယ်လောင်းတွေ ၀င်ပြီး မဲဆွယ်လို့မရပါဘူး။ တပ်အပြင်မှာပဲ မဲဆွယ်လို့ ရမယ်။” ဟု ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ငါးလပတ် ကုန်သွယ်မှု လိုငွေ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၁၉၄. ၃၁ သန်းရှိ Posted: 01 Oct 2015 04:12 AM PDT
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် ပထမ ငါးလပတ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှု လိုငွေမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၁၉၄. ၃၁ သန်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ဗဟို
စာရင်းအင်း အဖွဲ့မှ လစဉ် တင်ပြသော ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် အခြေအနေ အစီရင်ခံစာအရ သိရှိရသည်။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပုံမှန် ပို့ကုန် တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂,၈၃၅ .၉၅ သန်း၊ နယ်စပ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေကြီးဆုံးရှုံးမှု မြင့်မားလာခြင်းမှာ သစ်တောပြုန်းတီးမှုကြောင့်ဟု ADB ဘဏ်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ပြောကြား
Posted: 01 Oct 2015 04:05 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယခုနှစ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ရေလွှမ်းမိုးမှုမှာ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး လူ ၁.၆ သန်းခန့် ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရကာ ၁၀၀ ကျော် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ လယ်မြေအများစုအပါအ၀င် စိုက်ပျိုးမြေဟက်တာ လေးသိန်းနီးပါး ရေလွှမ်းခဲ့ပြီး ငါးကန်များ၊ တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးခြံများလည်း ရေလွှမ်းမိုးခံရကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံခဲ့ရသည်။ မုတ်သုန်မိုးအားကောင်းမှုနှင့် အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်
Posted: 30 Sep 2015 08:35 PM PDT
( ယခု ဓာတ်ပုံမှာ ကိုမန်မုန်တိုင်း ဖြတ်သန်းစဉ်က မြင်တွေ့ရသော စစ်တွေဆိပ်ကမ်း ဖြစ်ပါသည်။ Photo- Narinjara)
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁
ရန်ကုန်မှ စစ်တွေသို့ ခုတ်မောင်းလာသော ကုန်တင်သင်္ဘော ကံ့ကော်ထူး (၁) သည် ယခုလ ၁၈ ရက်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် နစ်မြုပ်သွားသဖြင့် သင်္ဘောသား ၉
ဦးမှာ ယနေ့ထိ ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ရေကြောင်း ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထင်ကျော်မှ သင်္ဘောနစ်မြု
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အစိုးရတပ်သားတချို့ ကင်းလှည့်နေစဉ်။ Photo: Kyaw Myo Min/ RFA
ကချင်ပြည်နယ်၊ဗန်းမော်ခရိုင်၊ မန်စီမြို့နယ်အတွင်း အစိုးရတပ်နဲ့ KIA ကြား တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေရာမှာ အစိုးရတပ်က မန်စီမြို့တွင်းကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်ခတ်နေတာရပ်တန့်ဖို့ မြို့လူထု၊အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ်တချို့က ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထံ စာပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့၊ အစိုးရတပ်က
ဆက်လက် ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ မ
ကော့သောင်း စက်တင်ဘာ ၃ဝ
ကော့သောင်းမြို့ ကော့သောင်း-ဘုတ်ပြင်း အဝေးပြေးလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ်(၂၂၆/၅) ၁ဝ မိုင် ကျေးရွာအနီးတွင် လမ်းဘေးချရပ်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်အား အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနှင်လာ သည့် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးက နောက်မှဝင်တိုက်သဖြင့် ဆိုင်ကယ်မောင်းလာသူ သေဆုံးပြီး တစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်က ယာဉ်မောင်း ဦးအဝမ်း မောင်းနှင်သည့် တိုယိုတာအမျိုးအစား ထရပ်
Posted: 30 Sep 2015 08:34 PM PDT
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသများ ဖြစ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ခရိုင်များတွင် လာရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားသား များ အပါအဝင် မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်း ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဈေးရောင်းချခြင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြု ကြောင်း တားမြစ်အမိန့်အသိပေး ဆိုင်းဘုတ်ကြီးများကို စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်က စိုက်ထူသတိပေးထား ကြောင်း သိရသည်။
ရုရှား နိုင်ငံ လေကြောင်း တပ်ဖွဲ့ မှ လေယာဉ် များအား မြင်တွေ့ခဲ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မော်စကို ၊ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှား နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ Konashenkov မှ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရုရှား နိုင်ငံ လေကြောင်းနှင့် အကာသ
ဌာန မှ လေယာဉ် အစင်း ၂၀ ခန့် အသုံးပြု၍ ဆီးရီးယား နိုင်ငံ အတွင်းရှိ IS အဖွဲ့ ၏ မြေပင် ပစ်မှတ် ၈ ခုကို လေကြောင်း မှ တိုက်ခိုက် ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား IS စစ်သွေးကြွတွေကို ဆီးရီးယားမှာ အမေရိကန်လေကြောင်းက ဆက်တိုက် Posted: 30 Sep 2015 08:34 PM PDT
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး ဆီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ IS အစ္စလာမ်မစ် စစ်သွေးကြွတွေအပေါ် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ ဆက်လက် ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ အမေရိကန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဆီးရီးယားအစိုးရကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့အနေနဲ့ ရုရှားက လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က စတင် ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ဆီးရီးယား လေကြောင်းပိုင်နက်အတွင်း အမေရိကန် လေယာဉ်တွေ ၀င်မလာဖို့ ရု
​ဘာ​ရိန်း​မှာ ​ဖေါက်​ခွဲ​ပ​စ္စည်း ​အ​များ​အ​ပြား ​သိမ်း​ဆည်း​မိ
Posted: 30 Sep 2015 08:33 PM PDT
ဘာ​ရိန်း​မှာ ​နိုင်​ငံ​ရေး ​ပြု​ပြင်​ပြောင်း​လဲ​မှု​တွေ ​လုပ်​ဖို့ ​ရှီ​အာ ​လူ​များ​စု​က ​တောင်း​ဆို​နေ
​ဘာ​ရိန်း ​ပင်​လယ်​ကွေ့​နိုင်​ငံ ​မာ​နား​မား ​မြို့​တော်​နား​က ​ရွာ​တ​ရွာ​မှာ ​ဖေါက်​ခွဲ ​ပ​စ္စည်း​တွေ ​အ​စု​လိုက်​အ​ပြုံ​လိုက် ​ရှာ​ဖွေ
​တွေ့​ခဲ့​တယ်​လို့ ​ရဲ​တွေ​က ​ပြော​ပါ​တယ်။
​ဖေါက်​ခွဲ​ပ​စ္စည်း ​တ​တန်​ခွဲ ​နီး​ပါး​လောက်​ကို ​မောင်း​ပြန် ​သေ​နတ်​တွေ၊ ​လက်​ပစ်​ဗုံး​တွေ​နဲ့ ​အ​တူ ​မြေ​တိုက်
Posted: 30 Sep 2015 08:44 PM PDT
​ကု​လ​ရုံး​ချုပ် ​က ​ပါ​လက်​စ​တိုင်း ​အ​လံ​လွှင့်​ထူ​တဲ့ ​အ​ခမ်း​အ​နား
​န​ယူး​ယောက်​မြို့ ​ကု​လ​သ​မ​ဂ္ဂ ​ရုံး​ချုပ်​မှာ ​ပ​ထ​မ​ဆုံး ​အ​ကြိမ် ​အ​ဖြစ် ​ပါ​လက်​စ​တိုင်း ​အ​လံ ​လွှင့်​ထူ​တဲ့ ​အ​ခမ်း​အ​နား​ကို ​ပါ​လက်​စ​တိုင်း ​ခေါင်း​ဆောင် ​မာ​မွတ်ဒ် ​အ​ဘာ့စ် ​တက်​ရောက်​ခဲ့​ပါ​တယ်။
​ကု​လ​သ​မ​ဂ္ဂ ​အ​တွင်း​ရေး​မှူး​ချုပ် ​ဘန်​ကီ ​မွန်း​က ​ဒီ​အ​ခမ်း​အ​နား​ဟာ
​က​မ္ဘာ​တ​ဝှမ်း​မှာ ​ရှိ​တဲ့ ​ပါ​လက်​စ​တို
မြန်မာအလုပ်သမားရေး ဥပဒေတချို့ ပိုမိုထိရောက်အောင် ပြင်ဆင်ဖို့ရှိ Posted: 30 Sep 2015 08:33 PM PDT
မကြာသေးခင်က ပြဌာန်းထားတဲ့ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးဥပဒေနဲ့ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေးဥပဒေတို့မှာ အကြိမ်ကြိမ် အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို ထိရောက်အောင် အရေးယူနိုင်မယ့် ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်တွေ ထည့်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်သွားဖို့ ရှိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဥက္ကှဌက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ထားပြီးတဲ့ တည်ဆဲ အလုပ်သမားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပဒေ ၁၀ ခုကျော်ကို ပေါင်းကာ ပင်မ အလုပ်
မြန်မာလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့ Fortify Rights အဖွဲ့ တိုက်တွန်း Posted: 30 Sep 2015 08:33 PM PDT
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပဖို့ရှိတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒုတိယအကြိမ် UPR လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ပုံမှန် ပြန်လည် သုံးသပ် စိစစ်မှုမှာ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေမှုတွေ အဆုံးသတ်စေရေးအတွက် ခိုင်မာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေ ယူမယ်ဆိုတာကို ကတိပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ ထိုင်းအခြေစိုက် Fortify Rights အဖွဲ့ကြီးက စက်တ
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ငါးဖမ်းလှေများကြောင့် ကော့သောင်မြို့ခံ ကမ်းနီးငါးဖမ်းလှေများ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာရ
Posted: 30 Sep 2015 08:32 PM PDT
တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကာ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော်သည့်လှေများကြောင့် တရားဝင် ငါးဖမ်း လိုင်စင်များဖြင့် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် လျက်ရှိသည့် ကော့သောင်းမြို့မှ ကမ်းနီးငါးဖမ်း လှေ အစင်း ၃ဝ ကျော်ခန့်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းခွင်ရပ်နားကာ ကော့သောင်းမြို့သို့ အစုအပြုံလိုက် ပြန်လည်ဝင်
ရောက်လာရကြောင်း ငါးဖမ်းလှေအုပ်စုမှ အဖွဲ့ ခေါင်းေ
ပုသိမ် စက်တင်ဘာ ၃ဝ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခွင် ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများတွင် ပုသိမ်ခရိုင် သာပေါင်းမြို့နယ် ငှက်ပျောတော ကျေးရွာအုပ်စု ကုလားဝဲ၊ ရှမ်းချောင်၊ ကန်လျားကုန်း၊ မယ်ဝန်းဂျောင်၊ တံခွန်တိုင် ၊ ဥသျှစ်၊ ဘုရားနီကျေးရွာ များသည် စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက် အထိ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဒဏ်ကြောင့် လယ်ယာမြေနှင့် အင်းအိုင်ဆည်တွေ ရေပြင်ဖွေးဖွေးနှင့် ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင် ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
မြစ်ရေလျော့ပါးလာသည် ဆိုသော် လည်း ခြော
Posted: 30 Sep 2015 02:59 PM PDT
​နေ​ပြည်​တော် ​ဂျန်း​ရှင်း ​စင်​တာ
​နေ​ပြည်​တော် ​ရဲ့ ​စည်​ကား ​ရာ ​နေ​ရာ ​တစ်​ခု ​ဖြစ်​တဲ့ JUNCTION ​လယ်​ဝေး ​စင်​တာ ​အ​နီး​မှာ ​စက်​တင်​ဘာ​လ ၂၉ ​ရက်​နေ့​က၊ ​လူ​ငယ် ​စုံ​တွဲ (၁) ​တွဲ​ကို ​လူ (၄) ​ဦး​က ​ဓါး​ထောက် ​ခေါ်​ဆောင်​ပြီး ​အ​ဓ​မ္မ​ပြု​ကျင့် ​သတ်​ဖြတ် ​မှု​ဖြစ်​ပွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။
​လယ်​ဝေး ​မြို့​နယ်​မှာ ​နေ​တဲ့ ​ညား​ခါ​စ ​လင်​မ​ယား ​ကို​ချစ်​နိုင်​ဦး ​နဲ့ ​မ​ငြိမ်း​ငြိမ်း​သော်​ဇင် ​တို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ ဆက်နွယ်ကြောင်းတရားစွဲ ခံရသူ ထောင် ၃ နှစ်ချမှတ်ခံရ
Arakan Army AA ခေါ် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့ကို တွေ့ရစဉ် Photo:
ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ်မှာ AA ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နဲ့ ဆက်နွယ်တယ်ဆိုပြီး တရားစွဲခံထားရတဲ့ လဟာပြင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းမောင်ကို မတရား အသင်း အက်ဥပဒေပုဒ်မ- ၁၇(၁) နဲ့ မင်းပြားမြို့နယ် တရားရုံးက အလုပ်နဲ့ ထောင်ဒဏ်(၃) နှစ် မနေ့က ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအမှုအတွက် အယူခံဝင်သွားမယ်လို့ အမှုကို လိုက်ပါကူ
ကယား(ကရင်နီ) ပြည်နယ်တွင် လမ်းဘေးရောက်ကလေးငယ်များနှင့် အရွယ်မရောက်သေးပဲ အလုပ်လုပ်နေရသော ကလေးငယ်များစွာရှိနေသည်ဟု စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့မှ ၂၉ ရက် နေ့တွင် ကျင်းပသော ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမတွင် သိရသည်။
ကလေးများကျောင်း နေရမည့်အရွယ်တွင် မနေရပဲ လမ်းပေါ်တွင် ထွက်ကစားနေရသောကလေး များစွာတွေ့ရသဖြင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း ပုဂ္ဂိုလ်များမှတဆင့် ကျောင်းသားမိဘများကို ခေါ်ြ
Posted: 30 Sep 2015 03:24 PM PDT
မြန်မာ-ယန်စီကုမ္ပဏီရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တခုအား တွေ့ ရစဉ်။ ဓါတ်ပုံ - မြန်မာ-ယန်စီ ၀က်ဆိုဒ်
တရုတ်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာ-ယန်စီကုမ္ပဏီရဲ့ ကြေးစင်တောင် စပါယ်တောင် ကြေးနီထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ကွက်ကနေထွက်ကျလာတဲ့ ရေဆိုးတွေကြောင့် အနီးတဝိုက် ကချောင်းထဲမှာ ငါးတွေသေကြေ ပျက်စီးရတဲ့အပြင် လူရောကျွဲနွားတွေအတွက်ပါ အန္တရာယ်များနေတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေက ယန်စီကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူတွေကို ဒီနေ့တွေ့ပြီး အဲဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ တော